Global Voices teny Malagasy » Tanzania: Fisamborana bilaogera noho ny hosoka tamin’ny sarin’ny filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jona 2018 4:27 GMT 1	 · Mpanoratra J. Nambiza Tungaraza Nandika (fr) i Fabienne Flessel, Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Tanzania, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nosamborina tao Tanzania ilay bilaogera sy lazaina fa tompon'ny bilaogy, Ze Utamu (zeutamu.com).
Hatramin'ny omaly [18 Jona], mandeha ny fifanakalozan-dresaka ao amin'ny tambajotran-tserasera Tanzaniana Jamii Forum.  Nandefa vaovao sy ny sarin'ilay bilaogera nosamborina ny Swahili Time  androany. Malecela Peter Lusinde, 39 taona, mpanolo-tsaina momba ny kajimirindra avy any amin'ny faritra Essex, Fanjakana Mitambatra izany.
Araka ny vaovao nalefan'ny Swahili Times [toa tsy hita intsony ny vaovao], nahangona vaovao ampy ny polisy Tanzaniana miara-miasa amin'ireo namany Britanika fa i Lusinde tokoa no tompon'ny bilaogy Ze Utamu, nakatona tamin'ny febroary teo . Niseho ity fanakatonana ity taorian'ny famoahana sary namboamboarina izay mampiseho ny filoha Tanzaniana Jakaya Kikwete amin'ny sary mamoafady.
Eo amin'ny lafiny lalàna, tsy mbola mazava tsara io fisamborana io. Tsy mamela ny zom-pirenena roa i Tanzania ary raha mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra i Lusinde, tsy mbola fantatra tsara izay lalàna hifehy ny fisamborana azy. Hoy ny kaontin'ny Swahili Times hoe:
Araka ny vaovao voamarina, naverina tany Tanzania i Ndg Malecela mba hatao fanadihadiana momba ny fitantanana tranonkala lazaina fa manala-baraka sy mahamenatra, fitarainana 6850 no voaray momba ity tranonkala ity […]
Mbola tsy fantatra hatramin'izao hoe lalàna inona no hitsaràna an'i Ndg Malecela. Ankoatra izany, nanadihady Tanzaniana roa tao Wichita sy San Diego any Etazonia ireo mpanadihady azy noho ny anjara toeran'izy ireo ao amin'ny bilaogy Ze utamu.
Ankoatra ny lafiny lalàna, manome ny heviny mikasika ny zavatra hitany ho mizàna tsindrian'ila ireo mpikambana ao amin'ny Jamii Forum. Hoy i Semilongdit:
Ny bilaogy “utamu” ve no heloka ratsy indrindra nataona Tanzaniana iray? manao “mizana tsindriana ila” ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny Forum Jamii satria manohana ny fanakanana ny bilaogy Ze utamu, kanefa miriaria malalaka ireo mpandroba eto amin'ny firenentsika…
Tokony hiara-miasa amin'ny Interpol izy ireo mba hiantohana ny famerenana ny vola rehetra miafina any Dubai, nosy Jersey sy ny toeran-kafa ho ao Tanzania […]
Mbola ao amin'ny Forum Jamii ihany, BlueRay, izay manohana ny fanakanana, nanampy hoe:
Maivana izany fandresen-dahatra izany. Ny tsy rariny iray tsy hahaonitra iray hafa: Tsy tianay ireo olom-pirenena britanika (na teratany Tanzaniana na tsia) hoavy hilaza fanalam-baraka marobe sy tsy tapaka ataon'izy ireo mikasika ireo Tanzaniana, tsy misy fanamarinana.
Moa ve ny governemanta Tanzaniana mikasa hamaha tsy-olana amin'ny alàlan'izany fa tsy mikasa hanala ireo trosa ivelany tsy voaefan'ny firenena, mazava ho azy fa eny. Azontsika atao ihany koa ny milaza fa mora ny fandresena satria namela marika hatraiza hatraiza manodidina azy ilay lehilahy, mpanolo-tsaina momba ny solosaina tahaka ny ahoana re izy!! … Ny mampalahelo ahy indrindra dia ny fanehoana ny filoha mihitsy ao anatin'ny resaka pôrnôgrafia sy maharikoriko mba hampandeha ny zavatra.
Manahy momba ny tsy fisian'ny lalànantsika mifehy ny fampiasana ny aterineto aho ary koa ny zava-misy fa voafetra ny fahafahantsika ara-pitsarana satria tamin'ny lohamilina Britanika (?) sy avy amin'ny olona britanika ny nanao azy. Noho izany raha maka mpisolovava mahay tsara ilay lehilahy ary tsy mampiasa fitaovana ivelan'ny fitsarana ny governemanta (izany hoe tsy mamindra azy, tahaka ny fomban'i Ghailani, ao anatin'ny fanagadrana vonjimaika manohitra ny fampihorohoroana jadona sy henjana), dia ho afaka madiodio izy.
* Tsy nanamarina ny vaovao navoaka tao amin'ny bilaogy resahana ao amin'ity lahatsoratra ity ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/22/121668/
 Jamii Forum.: http://www.jamiiforums.com/habari-hoja-mchanganyiko/31691-ze-utamu-blogger-under-arrest.html
 vaovao : http://swahilitime.blogspot.com/2009/06/ze-utamu-blogger-adakwa.html
 Ze Utamu, nakatona tamin'ny febroary teo: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/06/04/11240/